Legioma eo amin’ny Petite Vitesse: kely ny vokatra miakatra no mbola ratsy vidy | NewsMada
Legioma eo amin’ny Petite Vitesse: kely ny vokatra miakatra no mbola ratsy vidy
Par Taratra sur 24/11/2021
Christine na i Tine no fiantso azy, sady mpamboly no mpivarotra legioma sy anana eny amin’ny Petite Vitesse, Tsaralalana. Avy any Ambalavao Antananarivo Atsimondrano no misy azy sy ireo namany, anisan’ireo mpamatsy legioma sy anana eto Antananarivo. 26 taona nanaovana izany asa izany. Fanadihadiana.
Isaky ny hariva manomboka amin’ny 5 ora ka hatramin’ny 3 ora na 5 ora maraina no mivarotra ambongadiny sy antsinjarany eo amin’ny Petite Vitesse ireo tantsaha mpamboly. Misy ny avy any Ambalavao, Alasora, Ambohimanambola, Ambohijafy. 500 eo ho eo izy ireo eo amin’ny Petite Vitesse, Tsaralalana. Tantsaha manana karatra ara-dalàna daholo, mandoa haban-tsena. Samy manana ny mampiavaka izay amidiny izy ireo : legioma, ohatra, mbola misy ny mampiavaka azy, tsy mivarotra afa-tsy laisoa, betterave, poireau. I Tine sy ny namany avy any Ambalavao, mivarotra zava-manitra maitso fanao amin’ny sakafo (tongolo maitso, persil, céleri, menthe…).
“Saika ireo mpamongady avy any Anosibe, Isotry, Namontana, Andravoahangy no maka entana eto aminay amin’ny alina, miampy ireo alefanay any amin’ny faritany. Izaho izao vao avy any Ambodivona nanatitra entana alefa any Toamasina”, hoy i Tine. Ao ihany koa ireo trano fisakafoana sasany tonga dia maka izay ilainy amin’izy ireo. Misy mividy amin’ny alina, misy amin’ny maraina. Ankoatra izay, ao ireo olon-tsotra miantsena eny an-toerana mividy antsinjarany.
Amin’izao fotoana izao, velon-taraina ireo tantsaha mpamboly, satria ny orana tsy misy, ny vokatra tsizarizary, mihena ny fidiram-bola ho azy ireo. “Zara raha misy azo raisina, ny vokatra sy ny varotra. Simba ny voly”, hoy i Tine sy ireo namany. “Taloha rehefa fotoanan’ny fahavaratra, betsaka ny vokatra sady tsara, maro ihany koa ny lafo”, hoy ihany izy ireo. Ankehitriny, be ny vokatra tsy lafo, nefa tsy maintsy miala amin’ny toerana misy azy izy ireo rehefa maraina, dimbiasin’ny mpivarotra hafa.
Ratsy ny vidim-bokatra, romarin fehezana iray, ohatra, taloha 1000 Ar izao lasa 300. Vitsy koa ny entana lafo, raha ny filazan’ireo tantsaha misy ariana fotsiny ny hiafarany, fatiantoka tanteraka ho azy ireo. Kely ny vola miditra amin’ireo tantsaha mpamboly, nefa mpamatsy legioma sy anana ho an’Antananarivo sy any amin’ny faritra.
Tsy miova ny fitaterana
Ireo kaoperativa amin’ny zotra rezionaly no miantoka ny fitaterana. Ny avy any Ambalavao Atsimondrano, ohatra, taterin’ny Kofiavo, mijanona eo amin’ny CNaPS ; avy eo indray taterina amin’ny kalesy hatreo amin’ny Petite Vitesse. 1500 Ar ny saran-dalana isan’olona ary 500 Ar ny kitapo iray feno entana. Misy kosa fiara sasany avy any amin’ny kaominina hatreo an-toerana mikarama isaky ny alina mitatitra vokatra. Nomarihin’ireo mpivarotra fa tsy misy fiovana ny saran-dalana hatramin’izao.
Olana iray itarainan’ireo mpivarotra ny fahateren’ny toerana fivarotana. Ny avy any Ambalavao izao, ohatra, faritra kely fotsiny nefa misy 33 ry zareo. Efa nisy ny fifampidinihana tamin’ny kaominina momba izay, hijerena vahaolana momba ny toerana, toy ny ataony amin’ireo mpivarotra hafa. Olana iray hafa ny tsy fisian’ny rano, na rano sotroina aza mampijaly. Marihina fa miompy kisoa, omby, akoho ihany koa ny maro amin’izy ireo.